district0x စျေး - အွန်လိုင်း DNT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို district0x (DNT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ district0x (DNT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ district0x ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $4 075 216.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ district0x တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
district0x များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
district0xDNT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00883district0xDNT သို့ ယူရိုEUR€0.0075district0xDNT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00677district0xDNT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00807district0xDNT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.08district0xDNT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0558district0xDNT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.197district0xDNT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0331district0xDNT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0118district0xDNT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0123district0xDNT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.198district0xDNT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0685district0xDNT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0479district0xDNT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.663district0xDNT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.48district0xDNT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0121district0xDNT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0134district0xDNT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.276district0xDNT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0615district0xDNT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.936district0xDNT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.51district0xDNT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.35district0xDNT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.651district0xDNT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.244
district0xDNT သို့ BitcoinBTC0.0000008 district0xDNT သို့ EthereumETH0.00002 district0xDNT သို့ LitecoinLTC0.000156 district0xDNT သို့ DigitalCashDASH0.00009 district0xDNT သို့ MoneroXMR0.0001 district0xDNT သို့ NxtNXT0.655 district0xDNT သို့ Ethereum ClassicETC0.00129 district0xDNT သို့ DogecoinDOGE2.65 district0xDNT သို့ ZCashZEC0.0001 district0xDNT သို့ BitsharesBTS0.349 district0xDNT သို့ DigiByteDGB0.335 district0xDNT သို့ RippleXRP0.0306 district0xDNT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000307 district0xDNT သို့ PeerCoinPPC0.0306 district0xDNT သို့ CraigsCoinCRAIG4.06 district0xDNT သို့ BitstakeXBS0.38 district0xDNT သို့ PayCoinXPY0.155 district0xDNT သို့ ProsperCoinPRC1.11 district0xDNT သို့ YbCoinYBC0.000005 district0xDNT သို့ DarkKushDANK2.85 district0xDNT သို့ GiveCoinGIVE19.25 district0xDNT သို့ KoboCoinKOBO2.09 district0xDNT သို့ DarkTokenDT0.00814 district0xDNT သို့ CETUS CoinCETI25.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 18:45:02 +0000.